मधुमेह - स्वास्थ्य - प्रकाशितः जेष्ठ ७, २०७५ - नारी
डा. मधु पाण्डे
मानिसको शरीरमा हुने विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाका कारण रगतमा लामो समयसम्म चिनीको मात्रा बढी हुने रोगलाई मधुमेह भनिन्छ । बोलचालको भाषामा यसलाई सुगर भनिन्छ । शरीरमा इन्सुलिनको कमी तथा इन्सुलिनको अल्छीपनका कारण मधुमेह हुन्छ । रगतमा चिनीको मात्रा बढी भएपछि लगातार पिसाब लाग्नुका साथै तिर्खा र भोक पनि बढी लाग्छ । समयमै उपचार नगरे यसले जटिलता उत्पन्न गराउनसक्छ ।
मधुमेह प्यांक्रियाजले पर्याप्त मात्रामा इन्सुलिन उत्पादन गर्न नसके वा उत्पादन भएको इन्सुलिनप्रति शरीरका कोषले राम्रोसँग प्रतिक्रिया जनाउन नसके उत्पन्न हुने समस्या हो । मधुमेह प्रोग्रेसिभ तथा क्रोनिक रोग हो । यो सामान्यत: तीन किसिमको हुन्छ ।
टाइप वान (पहिलो किसिमको)
शरीरमा इन्सुलिनको उत्पादन धेरै कम हुँदा रगतमा ग्लुकोजको मात्रा सामान्यभन्दा बढी हुने अवस्थालाई पहिलो किसिमको मधुमेह भनिन्छ । यो प्यांक्रियाजले पर्याप्त मात्रामा इन्सुलिन उत्पादन गर्न नसकेका कारण देखिने समस्या हो । यसका बिरामीलाई बचाउन इन्सुलिनको आवश्यकता पर्ने भएकाले जीवनभर इन्सुलिनको भर पर्नुपर्छ । यो मधुमेह खासगरी बाल्यावस्था तथा किशोरावस्थामा देखिन्छ ।
टाइप टु (दोस्रो किसिमको मधुमेह)
यो इन्सुलिनको प्रतिरोधका कारण उत्पन्न हुने समस्या हो । यो समस्याका कारण शरीरका कोषहरूले इन्सुलिनप्रति राम्रोसँग प्रतिक्रिया जनाउन सक्दैनन् । रोग बढ्दै गएपछि इन्सुलिनको अभाव पनि देखिनसक्छ । यसलाई इन्सुलिनमा आधारित नहुने डाइबिटिज का रूपमा पनि चिनिन्छ । अधिक तौल तथा अपर्याप्त शारीरिक व्यायाम टाइप टु मधुमेहका प्रमुख कारक हुन् । यो मधुमेह सामान्यत: ३०–३५ वर्षको उमेरमा देखापर्छ ।
यो मधुमेह गर्भावस्थामा देखिन्छ । यो गर्भवती महिलामा पहिले कहिल्यै मधुमेह नभएको भए पनि चिनीको मात्रा बढेर एक्कासि देखापर्छ । गर्भावस्थापछि यो आफैं हराएर जान्छ तर ५० प्रतिशत महिलामा भने धेरै पछि गएर फेरि मधुमेह हुने सम्भावना हुन्छ ।
 अन्तर्राष्ट्रिय मधुमेह संगठनका अनुसार सन् २०१२ मा विश्वभर मधुमेह रोगका कारण ४८ लाख मानिसको मृत्यु भएको थियो ।
 मधुमेह बढ्दै जाँदा आँखा, मिर्गौला, मुटु, नसा, खुट्टाजस्ता शरीरका विभिन्न अङ्गमा समेत समस्या बढ्दै जान्छ ।
 दिनहुँ आधा घन्टा व्यायाम गरे मधुमेह लाग्ने सम्भावना ४० प्रतिशतसम्म कम हुन्छ ।
 संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २००७ देखि आधिकारिक रूपमा १४ नोभेम्बरका दिन विश्वभर मधुमेह दिवस मनाउन थालेको छ ।
मधुमेह कसरी थाहा पाउने ?
 तौल घट्ने तथा धेरै पटक पिसाब लाग्ने ।
 धेरै तिर्खा तथा भोक लाग्ने एवं मुख सुख्खा हुने ।
 घाउ–खटिरा आउने तर समयमा निको नहुने ।
 गुप्ताङ्ग चिलाउने ।
 दृष्टि धमिलो हुने ।
 हातखुट्टा झमझमाउने, कमिला हिँडेजस्तो महसुस हुने ।
 ५० प्रशितलाई भने कुनै लक्षण नै देखा नपरी मधुमेह हुनसक्छ ।
 फास्टिङ सुगर १ सय २८ भन्दा माथि र खाना खाएपछि २ सयभन्दा माथि भए मधुमेह भएको मानिन्छ ।
 एचबीए वान सी (तीन महिने सुगर जाँच) ६ दशमलव ५ भन्दा माथि देखिए मधुमेह हुन्छ ।
 सन्तुलित खाना, नियमित व्यायाम र उचित औषधि तथा इन्सुलिनको प्रयोगले मधुमेहलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ ।
 कार्बोहाइड्रेडयुक्त खाना जस्तो भात, आलु आदि कम खानुपर्छ ।
 अण्डाको सेतो भाग तथा माछा खानुपर्छ ।
 रातो मासु धेरै नखाने, चिल्लो बोसो नभएको मासु खाने ।
 ताजा सागपात एवं फलफूल खाने ।
 नुन कम अनि झोल तथा सुप बढी खानुपर्छ ।
 चिनी कम भएको चिया तथा कफी कम मात्रामा सेवन गर्नुपर्छ ।
 रेसा भएका खानेकुरा प्रशस्त खानुपर्छ ।
 मधुमेहबाट जोगिन स्वस्थ खाना खाने, शरीरको तौल सामान्य राख्ने । दिनहुँ ३० मिनेटजति पसिना आउने गरी हिँड्ने तथा योग गर्ने बानी बसाल्ने ।
 रक्तचाप नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ साथै खुट्टाको पनि हेरविचार गर्नुपर्छ ।
 टाइप वान मधुमेहलाई इन्सुलिनको आवश्यकता पर्छ भने टाइप टुका लागि औषधिका साथमा इन्सुलिन दिनुपर्ने वा नदिनुपर्ने हुनसक्छ ।
 प्रशस्त मात्रामा सागपात, फलफूल र रेसा भएका खानेकुरा खानुपर्छ ।
 उचाइअनुसार तौल मेन्टेन गर्नुपर्छ ।
 धूमपान गर्नुहुँदैन ।
 नवजात शिशुलाई दुई वर्षको उमेरसम्म स्तनपान गराउनुपर्छ ।
 पौष्टिक आहार खानुपर्छ ।
 नियमित उपचार गराउनुपर्छ ।
 तनाव लिनुहुँदैन ।
 मधुमेह भैसकेकाहरूले १–१ महिनाको फरकमा फास्टिङ र पीपी चेक गराउनुपर्छ । इन्सुलिन लिइरहेकाहरूले भने २–३ दिनमा घरमै ग्लुकोमिटरमा सुगर जँचाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
 तीन महिनाको फरकमा एचबीए वान सी चेक गराउनुपर्छ । ६–६ महिनाको फरकमा मिर्गौला तथा कोलस्ट्रोल जाँच गराउनुपर्छ ।
 प्रत्येक वर्ष आँखा तथा मुटु जाँच गराउनुपर्छ ।
 मधुमेह भैसकेकाहरूले औषधि सेवन नियमित रूपमा गर्नुपर्छ । औषधिले नभ्याए चिकित्सकको सल्लाहमा इन्सुलिन पनि लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
- इन्डोक्राइनोलोजिस्ट, हिमाल अस्पताल
चैत्र ७, २०७५ - महिलामा स्ट्रेस र एन्जाइटी
कार्तिक २२, २०७५ - मिठाईं र स्वास्थ्य